Uurka iyo dhalmada - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Uurka iyo dhalmada
Finland waxaa laga helaa adeegyo caafimaad oo wanaagsan oo loogu talagalay hooyooyinka uurka leh iyo carruurta yaryar. Caafimaadka hooyada iyo ilmaha dhallaanka ah waxaa lagu daryeelaa rugaha daryeelka caafimaadka hooyada. Waxaad halkaas ka heleysaa tilmaamo ammaan ah oo loogu talagalay uurka iyo dhalmada.
Saamiga uurka waxaa ka iibsan kartaa farmashiyaha. Dukaamada cuntada ee waaweyn xittaa waa iibiyaan saamiga uurka.
Marka aad uur leedahay:
Ballan ka qabso rugta la talinta hooyada
U tag dhakhtar ka hor inta bisha 4aad ee uurku aysan dhammaanin.
Haddii aad shaqeyso, wargelinta qoraal ah u samee shaqo-bixiyahaada ugu dambeyn 2 bilood ka hor intaadan gelin fasaxa hooyanimada.
Marka aad ogaato inaad uur leedahay, la xiriir rugta la talinta hooyada ama xarunta qoyska ee degmadaada. Adeegyada rugta la talinta iyo xarunta qoyska waad isticmaali kartaa haddii aad guri degmo ku leedahay Finland.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Guri degmo ee gudaha Finland.
Dadka megangelyo-doonka ah xittaa waa isticmaali karaan adeegyada rugta la talinta hooyada. Adeegyada magaalooyinka qaarkood xittaa waad isticmaali kartaa, haddii aadan Finland sharci ku joogin.
Kalkaalisada caafimaadka ee rugta la talinta joogta ayaa la soconeysa caafimaadkaada iyo caafimaadka cunuggaada. Rugta la talinta ayaad ka heleysaa tilaamo loogu talagalay uur iyo dhalmo ammaan ah. Waxaad sidoo kale ka heleysaa macluumaadyo muhiim ah oo ku saabsan adeegyada Finland ka jira ee loogu talagalay qoysaska carruurta leh. Uma baahnid in aad adeegyada rugta la talinta lacag ka bixiso.
Labada waalid ee cunugga yar waa lagu soo dhoweynayaa rugta la talinta. Haddii aad dooneyso xittaa waxaad u soo wadan kartaa qof ku caawiya.
Haddii aad turjubaad u baahan tahay, kalkaalisada rugta la talinta ayaa turjubaan u dalbeysa kulanka.
Hagaha la magacbaay Ilmo yar baa noodhalanaya(pdf, 1,46 Mt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Sami
U tag dhakhtarka rugta la talinta ka hor inta aysan bisha 4aad ee uurku dhamaanin. Inta badan waxaad dhakhtarka ballan ka samaysan kartaa adigoo soo maraya rugta talinta hooyada. Marka aad baaritaanka dhakhtarka tagto, shahaadada uurka ayaad heleysaa. Shahaadadan waxaad u baahantahay marka aad shaqo-bixiyahaada ka codsaneyso fasaxa hooyanimada. Shahaadada waxaad sidoo kale u baahan tahay haddii aad Kelada ka codsaneyso caawimaadda hooyanimada iyo lacagta hooyanimada.
Faahfahainta dheeraadka ah ee manfacyada ka aqri bogga InfoFinland Kaalmaynta hooyada uurka leh. Bogga Ammaanka bulsho ee Finland waxaa lagu sheegayaa qofka xaqa u leh manfaycada Kelada.
Rugaha la talinta hooyada ee gaarka loo leeyahay
Finland waxaa xittaa ku yaal rugo la talinta hooyada ah oo gaar loo leeyahay. Ku daro xisaabta in adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ay lacag yihiin.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri Adeega caafimaadka ee Finland.
Gudniinka qodban iyo uurka
Haddii laguugu sameeyay gudbiinka qodban, waxaa laguugu sameyn karaa qalliinka furista. Waxay fududeysaa baaritaanka mudada aad uurka leedahay. Waxaa sidoo kale kuu sahlan in aad dhasho. Qalliinka furista ah waxaa la sameyn karaa uurka ka hor, uurka dhexdiisa ama marka la dhalayo.
Kalkaalisada caafimaadka ee rugta latalinta ayaa ku weydiinaysa in gudniinka qodban laguu sameeyay iyo in kale. Waa muhiim in aad arrintan u sheegtaan, si kalkaalisada caafimaadku ay u ogaato oo ay qalliinka furista kuugu dirto.
Finland inta badan dumarku waxay ku dhalaan isbitaalka. Weydii rugta la talinta isbitaalka aad ku dhaleyso.
Haddii aad leedahay Guri degmo ee gudaha Finland, dhalmadu kharash badan kugu noqonmeyso.
Waalidka kale ee ilmaha wuxuu qeyb ka noqon karaa dhalmada. Haddii aad dooneyso waxaad soo wadan kartaa saaxiib ama qof ehel ah.
Finland inta badan waxay hooyooyinku ka dhalaan hoos. Waa habka ugu ammaanka badan. Haddii aysan sidani suurtagal aheyn, dhakhatar ayaa go’aan ka gaaraya in ilmaha lagu soo qalo.
Haddii aad ka baqaneyso dhalmada, kala hadal rugta la talinta. Cabsida waxaa caawimaad looga heli karaa tusaale ahaan bolikiliinikada cabsida dhalmada.
Inta badan dhalmada ka dib waxaa ilmaha yar la joogeysaa isbitaalka dhowr maalmood. Waalidka kale ama caawiye kale ayaa isbitaalka maalinta dhan kula joogi kara si uu kuu caawiyo. Haddii aad dhaleyso cunuggi kuugu horeeyay caawiyahaadu wuxuu inta badan kula joogi karaa isbitaalka xittaa habeenki.
Marka aad isbitaalka aadeyso, ilmaha yar u sii qaad dhar diiran oo aad ku huwiso inta aadan safarka guriga ku sii jirto. Haddii aad dooneyso in aad ilmaha guriga ku heyso baabuur, waxaad u baahan tahay in baabuurka la saaro weelka ammaanka ee ilamaha lagu qaado.
Turjumaadda marka la dhalayo
Wakhtiga saxda ah ee la dhalayo horay looma sii ogaan karo. Sidaas darteed ayeey u adag tahay in turjubaan la helo xilliga dhalmada.
Xarumaha turjubaanada qaarkood ayaa heegan ah dhammaadka todobaadka, habeenki iyo saqda dhexe. Rugta latalinta ayaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada turjubaanka ee degmadaada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada turjubaanka ka aqri bogga InfoFinland Turjubaan ma u baahan tahay?
Marka uu ilmuhu dhasho
Bogga Finland markii uu ilmuhu dhasho waxaa ku jiro macluumaad muhiim ah oo ku saabsan arrimaha ay tahay in aad sameyso dhalashada cunugga ka dib. Bogga waxaa ku jira tusaale ahaan macluumaad ku saabsan ka diiwaangelinta cunugga nidaamka macluumaadka dadka, sharciga magaca ee Finland iyo ammaanka bulsho ee cunugga.
Caawimaadda lagu helo ilmaha yar
Haddii isu aragto in aadan caawimaad la’aan kaligaa ku filneyn ilmaha yar, waxaad xannaneynta ilmaha yar ku baran kartaa guri horaadka. Weydii rugtaada la talinta waxqabadkan. Degmadaada ayaad uga baahan tahay in ay kuu gudbiyaan guri horaadka.
Macluumaad ku saabsan cudurka niyadjabka dhalmada ka dambeeyaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Carabi | Sami